Ukubetha kwentliziyo yomhlaba, imfihlelo kunye nokumiswa nguLuz Gabás | Uncwadi lwangoku
Ukubetha kwentliziyo yomhlaba
Ukubetha kwentliziyo yomhlaba Yincwadi yesine epapashiweyo ngumbhali waseSpain, ugqirha wezobugcisa kunye nezopolitiko, uLuz Gabás. Ngokungafaniyo nokukhutshwa kwayo kwangaphambili, esi sihloko asiyoncwadi yembali, eneneni ineqhinga lokuyimfihlakalo kunye nokuthandabuza. Ewe, umsonto obalisayo ugxile kuphando lolwaphulo-mthetho ngelixa ukhumbula ezinye iziganeko eziphambili kwixa elidlulileyo labalinganiswa.
Intshukumo yenzeka kwindlu yosapho kude nalo naliphi na iziko ledolophu. Apho, Alira, umlinganiswa ophambili ujongene nobunzima obukhulu bokugcina ipropati eyindlalifa yakhe. Ukwenza izinto zibe mbi nangakumbi, isidumbu sinye yeendwendwe zakhe sivela kwigumbi eliselugcinweni kunye nokukrokrela yinto eqhelekileyo yosuku.
1 Malunga nombhali
1.1 Iinoveli zaseLuz Gabás
1.1.1 Uthando ngamaxesha ahlukeneyo
2 Uhlalutyo lokubetha kwentliziyo yoMhlaba
2.3 Uhlobo loncwadi kunye nemixholo
2.3.1 Eyona noveli yothando kaLuz Gabás
3 Ufundo olucetyiswayo
UMaría Luz Gabás Ariño (1968) wazalelwa eMonzón (Huesca), eSpain. Wafumana isidanga sakhe njengesiNgesi philologist kwiYunivesithi yaseZaragoza. Kuloo ndlu yezifundo wayengumfundisi-ntsapho oqeshiweyo. Ngaphandle kokuzibophelela ekufundiseni, ingqondi evela eHuesca isebenze njengomphandi, umguquleli kunye nombhali wamanqaku oncwadi kunye nolwimi.
nayo, IGabás iye kwikhredithi yayo yenani lokuthatha inxaxheba kwiiprojekthi ezinxulumene nenkcubeko, imidlalo yeqonga kunye nemidlalo yeevidiyo (cinema, ikakhulu). Ukongeza, wayengusodolophu waseBenasque phakathi kowama-2011 nowama-2015. Ukuza kuthi ga ngoku, umbhali waseSpain upapashe iinoveli ezine eziphumelele ngokwamanani ohlelo kunye nokugxekwa okukhethekileyo okufunyenweyo.
Iinoveli zaseLuz Gabás
Ukuphehlelelwa kwinoveli yakhe yokuqala, Imithi yesundu kwikhephu (2012), imele umnyango kwihlabathi loncwadi ngesitayile. Akumangalisi ukuba kukho iinguqulelo kwisiTaliyane, isiCatalan, isiDatshi, isiPolish nesiPhuthukezi. Ukongeza, esi sihloko sasiwa kumdlalo bhanyabhanya (ngo-2015) phantsi kolawulo lukaFernando González Molina kwaye waphumelela amabhaso amabini eGoya (oyena mdlali ubalaseleyo, uMario Casas kunye nolona khokelo lubalaseleyo lobugcisa).
Uthando ngamaxesha ahlukeneyo
Kumsebenzi wakhe wokuqala, uGabás wasebenzisa amava katata wakhe e-Equatorial Guinea ukuphendula imibuzo eyahlukeneyo malunga ne-Spain yamva nje yobukoloniyali. Kamva, setha inoveli yakhe yesibini-Buyela kulusu lwakho (2014) - kwiiPyrenees zeAragonese zenkulungwane ye-XNUMXIbali lothando kakhulu phakathi kwexesha lokutshutshiswa okungapheliyo kwamagqwirha.
Ngokucacileyo, abalinganiswa bakaGabás bashukunyiswa yimvakalelo eqala ezona ntshukumisa zinzulu. Ewe, ayisiyonto yimbi ngaphandle kwale uthando. Eli nqaku linokubonakala ngokulinganayo kwi Njengomlilo kwiqhwa (2017), Imbali yakhe yenzeka embindini wenkulungwane ye-XNUMX, ezintabeni ezenza umda phakathi kweFrance neSpain. Okokugqibela, kwi Ukubetha kwentliziyo yomhlaba iziganeko zenzeka kumaxesha angoku.
Uhlalutyo Ukubetha kwentliziyo yomhlaba
Ukubetha kwentliziyo yomhlaba.
Ungayithenga le ncwadi apha: Ukubetha kwentliziyo yomhlaba
Phakathi kweminyaka yama-1960 kunye neye-1980, iSpain yatshintsha kakhulu kwiindawo zayo zasemaphandleni. Ngokukodwa, ngeli xesha, uninzi lokuhluthwa kwenzeka kwiidolophu ezinje ngeFraguas (Guadalajara), Jánovas (Huesca) okanye Riaño (León), phakathi kwabanye. Ngenxa yoko, ngaphezulu kwewaka lamabali osapho ahamba ngonaphakade, agwetyelwe ukungabikho.
Ke ngoko, umnqweno kunye nokuncamathela emhlabeni ziimvakalelo ezinokuthambeka kwisicatshulwa sonke, nangona sinomyalezo olungileyo. Ngamanye amagama, ngaphandle kokuba libali labantu, umbhali waseHuesca uhlala enika ukubaluleka kwendawo. Ngesi sizathu, Idolophu yasungulwa -Aquilare- apho iimeko ezininzi eziye zafunyanwa kwiidolophu ezichazwe kumhlathi odlulileyo zisuswa.
U-Alira yindlalifa yefama eyeyakhele usapho kwizizukulwana ezininzi. Kodwa imeko ahlala kuyo ibeka abantu mihla le; imeko yokulahlwa yenziwe mandundu ngumgaqo-nkqubo wokuphangwa kwamahlathi. Kwangokunjalo, imeko yezoqoqosho engqwabalala ibangela iindleko zolondolozo lwepropathi ekunzima ngakumbi ukuzisombulula.
Ngesi sizathu, umlinganiswa ophambili kufuneka athathe isigqibo sokuba abambe isikhundla esingahlukangayo kwimvelaphi yakhe okanye atshintshe indlela aphila ngayo ukuze aziqhelanise nobomi banamhlanje. Le tirade ivelisa ukungqubana okucacileyo phakathi komntu kunye noluntu, kunye nokuthandabuza okuninzi eAlira. Ke xa umzimba womntu obuleweyo uvela kwigumbi elingaphantsi kwendlu yakhe, imeko iba mbi kakhulu.
Uhlobo loncwadi kunye nemixholo
ILuz Gabás ibisoloko iyazi indlela yokuzihlaziya kukhuphelo ngalunye emva koko Imithi yesundu kwikhephu. Ewe kunjalo, impumelelo yencwadi yakhe yokuqala yayithetha ukonyusa kunye notorious awayesazi ukuba angayisebenzisa njani. Ungayichazanga ifilimu ebekekileyo ebangelwa yimbali. Nangona kunjalo, umbhali wayehlala ehlala ngaphakathi kuhlobo lwe inoveli yembali (okanye iintsomi zembali).
Oku akunjalo nge Ukubetha kwentliziyo yomhlaba, kuba iyelenqe lalo lolwaphulo-mthetho liphefumlelwe bubunyani bezinye iindawo ezisemaphandleni zaseSpain. Nangona uthando luqhubeka luyinjongo ephambili kubalinganiswa babo, ukukrokra kuyaqhubeka. Ayisiyongaphantsi, onke amalungu ebali akrokrelwa ukubulala kwaye anemicimbi ethile esalindelwe phakathi kwabo.
Eyona noveli yothando kaLuz Gabás
Ibinzana nguLuz Gabás.
Umbhali uxele kudliwanondlebe nejelo leAntena 3 Noticias (2019) ukuba mayibe yeyona "noveli yothando kwezine ndizibhalileyo." Ngendlela enye, UGabás uchaziwe kwisigqibo sakhe sokukhetha Uhlobo lwamapolisa Ukuphuhlisa ibali lakho embindini wemeko yasemaphandleni. Apho ukulahlwa sisiphumo esingenakuphepheka seentuthuzelo ezibonelelwa lixesha langoku.
Kule nkalo, UGabás uyacacisa: “Bendifuna ukuthetha ngokuhamba kwexesha kunye nendlela esilifumana ngayo ixesha elidlulileyo kwaye sibambelele kwinto ephelayo engasayi kubuya ngokomfuziselo.”. Ukongeza, umbhali waseAragonese uchaze le portal Imizuzu engama-20 (2019) ukuba "andazi ukuba ndiza kulifaka njani uthando kwinoveli yezopolitiko".
Ukubetha kwentliziyo yomhlaba Yincwadi eyonwabisa kakhulu, enomdla kwaye ekwaziyo ukugcina ulindelo lomfundi kude kube sekupheleni. Ngokufanayo, Ukufundwa okucingisisiweyo, kunokuthathelwa ingqalelo kwimeko yokomoya. Kuba ngokwendalo ijongana nemicimbi efana nexabiso lobuhlobo, ukunyaniseka kunye neendlela zomntu ngamnye ophakathi koluntu olutshintshayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ezahlukeneyo » Ukubetha kwentliziyo yomhlaba
USean Connery. Unaphakade James Bond kunye nabanye abalinganiswa boncwadi